Iindlela ezili-11 zokufumana okuninzi kwiGlobal Buds zeSamsung | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ezinye izixhobo, Tutorials
IGlobal Buds yeza neGPS S10 kwaye zinee-headphone ezingenazingcingo ezinokutshatisa ezona zibalaseleyo kudidi lwazo. Siza kukufundisa olona qhinga lubalaseleyo lwezi ntloko ehamba neGPS S10 + yenza uloyiko.
Uthotho lwamaqhinga e- fumana esona sandi silungileyo kwiGlass Buds, bayiqhelanise ngcono nelona lihle lomsebenzisi kunye noluhlu lokwenza ngokwezifiso ukubeka ukugqitywa kweefowuni ezisemgangathweni; Sikufundisa nokuba ulungise ukusikwa okuncinci okunokubakho kwabanye abasebenzisi.
1 Faka ii-Smart Izinto
2 Layita uPhendlo lwezixhobo ezikufutshane
3 Guqula iadaptha ukuze ibe nkulu
4 Sebenzisa isandi esisebenzayo
6 Yandisa isandi seGlass Buds
7 Sebenzisa ukuvumelanisa kwevolumu phakathi
8 Yenza ngokwezifiso amaqhosha okuchukumisa
9 Ukufundwa ngokupheleleyo kwezaziso kunye nemiyalezo
10 Lungisa ukusikwa okuncinci kwisandi
11 Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwii-headphone zakho ngeGPS S10
Faka ii-Smart Izinto
Ukuze usebenzise i Inqaku leGlass Buds lokudibanisa ngokuzenzekelayo Xa sibakhupha kwimeko yabo, kufuneka sifake usetyenziso lweSamsung Izinto. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba loofestile incinci izakuvela elumkisa ukuba singadibanisa ii-headphones ezingenazingcingo zeSamsung ngaphandle kokuya kwiBluetooth ukhetho lweGPS S10; ungaphoswa Olu luhlu lwamaqhinga eGPS S10 +.
Layita uPhendlo lwezixhobo ezikufutshane
Kwi-Samsung Galaxy S10 sinokukhetha vumela ukukhangela izixhobo ezikufutshane ukuze okwangoku sisuse i-Galaxy Buds kwimeko yabo, banxibelelana ngokuzenzekelayo ngefestile ekhankanyiweyo ngqo:
Makhe siye kuseto> Unxibelelwano> Useto okunxibelelana ngakumbi> Khangela izixhobo.
Guqula iadaptha ukuze ibe nkulu
Iifowuni ze-brand zase-Korea zase-Korea ezingenazingcingo ziza nezongezo ezahlukeneyo. Omnye wabo iadaptha ezahlukeneyo ukuze zilungele ngokugqibeleleyo kumngxuma wendlebe yethu. Sikucebisa ukuba uzame ezona zikhulu kuzo zonke kuba ziya kulunga ngcono. Kwimeko nayiphi na into, ngumcimbi wokuvavanya kuxhomekeke kumzimba wethu.
Sebenzisa isandi esisebenzayo
Ukuba ufuna ukuphucula isandi seGlass Buds yakho, kuyacetyiswa ukuba yenza isilinganisi sisebenze ezisa ezi ntloko kunye nayo. Ungayenza ukusuka kwi-Galaxy Wearable, usetyenziso oluya kuthi luqwalasele uninzi lweeparameter zokunxiba kwethu.
Kwiskrini esikhulu ungafumana isandi esisebenzayo, siyenze isebenze emva koko sibeka imowudi yebass ukuze zivakale ngcono iBuds zethu.
Iphantse ibe yinto ekufuneka yenziwe ukuze isebenze Isandi seGlass S10's Dolby Atmos. Ngokudibana nesandi esisebenzayo kunokuba yiduo ebulalayo kwabo bafuna ukufumana eyona nto ikumgangatho ofanelekileyo wesixhobo kwizixhobo zabo ezintsha ezinxitywayo. Ewe, ukuba "ikhwaza" kakhulu ngenxa yokuhamba, sicebisa ukuba uzame ukucima isandi esisebenzayo, kuba kuxhomekeke kakhulu kwisitayile somculo othanda ukumamela.
Ukusuka kwipaneli yesaziso Unokufumana ukufikelela ngokuthe ngqo kwiDolby Atmos ukuyenza isebenze kwiselfowuni yakho ye-Samsung S10.
Yandisa isandi seGlass Buds
Ngokuzenzekelayo kunokwenzeka ukuba uphoswe kancinci ngamandla kumthamo. Sinesisombululo kwaye sikhona sebenzisa «Khubaza umthamo opheleleyo» kukhetho lonjiniyela. Ngale nto siza kuthi:
Useto> Malunga nefowuni> Ulwazi lwesoftware> kwaye ucofe Amaxesha asixhenxe ku "Yakha inombolo" ukwenza ukhetho lonjiniyela.
Siya kukhetho oluseto kwaye sijonge ukhetho "Khubaza umthamo opheleleyo" kwaye siyenza ingasebenzi.
Sebenzisa ukuvumelanisa kwevolumu phakathi
Ukuba ufuna ngokuzimeleyo ukugcina umthamo weGlobal Buds kunye nemultimedia yefowuni yakho, ungayenza ngolu hlobo:
Useto> Unxibelelwano> iBluetooth> Ihambele phambili (ukusuka kwindawo emi-3 ethe nkqo)> kwaye usebenze ukhetho lwe "Ngqamanisa ivolumu".
Yenza ngokwezifiso amaqhosha okuchukumisa
KwiGalaxy Buds cofa ixesha elide ungazenza ezi zinto ngokwenza ngokwezifiso:
IVolumu phezulu / ezantsi.
Sebenzisa imowudi yegumbi okanye okomzuzwana.
Unayo Ukudibana oku-4 noBuds: Umatshini omnye wokushicilela, oomatshini bokushicilela ababini, abathathu ukucofa kunye nexesha elide. Umatshini omnye wokushicilela udlala / unqumama, oomatshini bokushicilela ababini kwingoma elandelayo, kunye noomatshini abathathu bokushicilela ukubuyela ekuqaleni kwengoma. Ezi ntshukumo zinokusetyenziswa xa sikumnxeba ...
Ukufundwa ngokupheleleyo kwezaziso kunye nemiyalezo
Ngokuzenzekelayo kwii-headphone ze-Samsung esinazo I-5 zokusebenza ezilungiselelwe ukuba zifunde imiyalezo ngelizwi kunye nezaziso ezifika. Kodwa singayiqwalasela ukuze yonke imiyalezo epheleleyo yazo zonke iiapps ifundwe.
Lungisa ukusikwa okuncinci kwisandi
Kwenzekile kwabanye abasebenzisi ukuba xa behamba neeGlobal Buds zabo isandi esinqumlayo senzeka iyacaphukisa. Singayisombulula ngale ndlela:
Makhe siye Useto> Ukugcinwa kwesixhobo> Ibhetri kwaye ucofe nakuphi na usetyenziso oluvela kuluhlu.
Kwiskrini seapp, cofa ku "Sebenzisa ukusetyenziswa kwebhetri".
Cofa apha "Iinkqubo azilungiselelwanga" kwaye sikhetha yonke into.
Sijonge kuluhlu "iBluetooth" kwaye singasebenzi.
Oku akuyi kukhulisa ibhetri yeBluetooth kwaye ukusikwa okuncinci akusayi kuphinda kwenzeke. Eli qhinga lisebenza kuphela kwabo banokusikwa okuncinci.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwii-headphone zakho ngeGPS S10
IGPS S10 inayo ukhetho lokutshaja ezinye izixhobo ngaphandle kwentambo. Kwaye phakathi kwabo sineGlass Buds. Ukuzilayisha senza oku:
Sisebenza kwipaneli ekhawulezayo kwibar yesaziso ukhetho lwe "Wireless Powershare".
Sifaka i-Galaxy S10 ukuze umqolo wayo ubonakale.
Sifaka ii-headphone ebhokisini labo.
Sibeka Ityala / ibhokisi yeGlobal Buds iphakame kancinci kunendawo ephakathi yefowuni.
Siza kubona ukuba i-LED eluhlaza okwesibhakabhaka ikhanya njani kumbala obomvu ukubonisa intlawulo. Kukho isilumkiso sokungcangcazela.
Amaqhinga ali-11 e-Galaxy Buds yakho ukuze ufumane uninzi lwezi ntloko ukusuka kwi-Samsung enikezela ngamava omsebenzisi amahle kuwo onke amanqanaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » [VIDEO] Amaqhinga alishumi elinanye alungileyo okufumana i-Samsung Buds ye-Samsung
UNintendo ukhumbula Umfuziselo woMlilo kunye nokuwela kwezilwanyana ukusuka kwintengiso yaseBelgium ngeebhokisi zokuphanga